Diosezy folo mankalaza taon-jobily faha 60 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mba hivelatra amin’ny lafiny rehetra maha olona tokoa ny katolika : ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-po. Asa sy fanavaozana eo amin’ny fomba fitoriana no hahatratrarana izany. Efa be ankehitriny ny lokom-piangonana, ka mora voajono amin’ireny ny olona. Tsy takona afenina izany. Miara-dalana amin’izay, diosezy folo no mankalaza taon-jobily amin’ity taona 2015 ity. 60 taona nisiana, 60 taona nitoriana ny vaovao mahafaly. Fanamby goavana àry ny miandry azy ireo : ny hitazona ireo efa ao am-bala sy hampitombo hatrany ny isany.
Izany no teny fampidirana mikasika ny fanadihadiana hita ao amin'ny Lakroan'i Madagasikara, mitondra ny daty 9 aogositra ary laharana 3932, efa jifaina io alakamisy 6 aogositra maraina io.
Tondro isa momba ireo diosezy folo feno 60 taona amin’ity taona 2015 ity
Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona
1950 : 590.000
2004 : 2.816.149
2012 : 3.363.000
Mgr Philippe Ranaivomanana
1950 : 236.580
2004 : 1.318.000
2012 : 1.903.300
Mgr Jean Claude Randrianarisoa
1949 : 69.347
2004 : 396.774
2013 : 497.000
1949 : 541.334
2004 : 2.211.809
2012 : 1.431.000
Mgr Rosario Vella
1950 : 365.592
2004 : 1.098.075
2012 : 1.471.000
1949 : 368.900
2004 : 992.794
2013 : 1.262.000
1950 : 371.500
2004 : 1.800.000
2014 : 1.992.866
1950 : 650.000
2004 : 1.153.750
2013 : 1.435.000
1950 : 212.000
2004 : 460.200
2013 : 546.000
1950 : 900.000
2004 : 860.000
Loharano : www.catholic-hierarchy.org
Ny fanadihadiana sy ny lahatsoratra dia niandraiketan'i Rabarisona sy Ravonjiniaina.